प्ले पूर्णतया आफ्नो कहानी conveys जो "अंकल Vanya", एक सारांश Antonom Pavlovichem Chehovym द्वारा लेखिएको थियो। उहाँले मात्र होइन एक playwright र लेखक, तर पनि आफ्नो जीवन भर अभ्यास छ चिकित्सा थियो। Anton Chekhov पछि धेरै लेखक द्वारा अपनाए थियो जो एक नयाँ प्रवृत्ति, को साहित्य सिर्जना।
उहाँले लेखक को मुख्य कार्य पाठक गरेको प्रश्न आफ्नो काम प्रतिक्रिया छैन भनेर विश्वास गरे। र, त्यसको विपरीत, तिनीहरूलाई सेट गर्न र विचार गर्नुपर्ने एउटा विषय बनाउन प्रक्रिया मा।
काम को शुरुवात। पहिलो कार्य
को सम्पत्ति मा चाय पार्टी को विवरण सुरु एक सारांश जो को प्ले "अंकल Vanya", ग्रामीण जीवनको दृश्य हुन्छन्। पुरानो चिनार अन्तर्गत विशेष चिया लागि ढाकिएको छ जो तालिका छ। मेघाच्छादित शरद ऋतु मौसम।
वृद्ध नानी मेरिना स्थित तालिका मा, wizened पुरानो महिला हेलेना, प्रोफेसर Serebryakov को पत्नी र जो सम्पत्ति पर्छ। Wynn, वा चाचा Vanya। तालिका वरिपरि nervously ASTROFF चलाउँछ। चाँडै नै त्यहाँ उपनाम वेफर दिइएको थियो Telegin। यो एक landowner बर्बाद, उहाँले dependents को अधिकार मा एक Manor बसोबास।
एक चिया पार्टीको लागि छलफलहरू वर्तमान
एक चिया पार्टीको लागि जम्मा गरेको यी मानिसहरूलाई के? प्ले "अंकल Vanya", जो को मात्र ती सबै वर्तमान को सामान्य माहौल मा एक सारांश, आफ्नो कार्यहरू विश्लेषण गर्ने कोसिस गर्दैन। लेखक मात्र आफ्नो तर्क र कार्य को विशुद्धता न्याय गर्ने पाठक गर्न दिने, वर्ण प्रत्येक को विचार voiced।
पेशा द्वारा ASTROFF डाक्टर र गर्दा पुरानो महिला आफ्नो चिया खन्याइदिएकी, उहाँले नथाकीकन उनको आफ्नो काम कठिनाइको बारेमा बताउँछ। उहाँले बारेमा किसान, विभिन्न महामारी को छाप्राहरू मा unsanitary अवस्था र कारण यो बारम्बार मृत्यु को complains। उहाँले पनि विनाकारण, तल कटौती जुन रूसी जंगल, बारे चिन्ता। तर, यो मानिस मात्र होइन प्रकृति संग sympathizes, तर पनि नयाँ saplings रोपेर समय पाता छ।
प्रोफेसर को पहिलो पत्नी को भाइ
आफ्नो पहिलो पत्नी Serebryakov को भाइ छ जो मामा Vanya, तब देखि, एक प्रोफेसर आफ्नो दोस्रो पत्नी, सबै बानी तरिका संग घर आए रूपमा पल्टाइदिनुभयो यदि त्यो grumbles। Wynn पनि Serebryakov आफ्नो डाह लुकाउन प्रयास गरेनन्। उहाँले आफ्नो स्थिर उजुरी criticizes। यो एक चौथाई शताब्दीको लागि प्रोफेसर, कला लेखे भन्ने तथ्यलाई mocks, तर यस तथ्यलाई केही मा बुझ्न छैन।
Elena Andreevna, पतिको भन्दा धेरै साना हो जो प्रोफेसर, कता हो कता यो Manor मा नरमाइलो लाग्यो को दोस्रो पत्नी। त्यो कुनै पनि मनोरञ्जन को कमी बारेमा complains। Fragmentary वाक्यांश र वर्तमान सबै ती लिङ्क छैन को प्रतिकृतिहरु। त्यहाँ एक सामान्य संवाद को तालिका छ। तर तिनीहरूलाई लागि यो प्ले "अंकल Vanya" मुख्यतया जो प्ले को वर्ण अनुभव छ नाटक, को तनाव अन्डरस्कोरहरू (यो एउटा संक्षिप्त विवरण विभिन्न संवादलाई समावेश जारी हुनेछ) भनेर न्याय गर्न सम्भव छ। यो सम्पत्ति न त समृद्धि न सौहार्द बाहिर।
पिउने प्रोफेसर आसपास
मामा Vanya आमा, Mariya, न्यानो व्यवस्थामा आफ्नो छोरा बुझाउँछ, र आफ्नो छोरा त्यो प्रोफेसर लागि घृणा व्यक्त के को लागि pronounces। एक Wynn डाह Serebryakov, मात्र किनभने आफ्नो क्यारियर मा आफ्नो सफलता को, तर पनि किनभने महिला बीच लोकप्रियता को। यसबाहेक, उहाँले युवा प्रोफेसर पति मन परायो।
तर Voynitskogo Elena Andreevna को पहिचान मा लिनु दिनु छैन, तर केवल अनिलको कुरालाई वास्तै। सुरुमा उनले पतिको तिर एक यस्तो मनोवृत्ति कस्तो कारण बुझेनन्। त्यो यो अरू सबैलाई जस्तै हो कि सोच्छ। त्यसैले प्ले "अंकल Vanya," Chekhov, को एक सारांश अन्त गर्न आए जो पहिलो अध्याय, आफ्नो वर्ण वर्णन गर्दछ। लगभग सबै नकारात्मक भावनाहरू प्रोफेसर वरिपरि केन्द्र।
भावना उच्च चलाउन, वा प्रोफेसर अस्त
थप के narrates आफ्नो प्ले "अंकल Vanya," Chekhov मा? कार्यकारी सारांश अब पूर्णतया Serebryakov समर्पित छ। प्रत्येक पारित मिनेट यो मानिस घृणा र दुश्मनी को माहौल thickens वरिपरि जस्तै लाग्यो। उहाँले शाब्दिक सबैलाई annoys। र अब, पनि आफ्नै पत्नी, यो अरू सबैलाई जस्तै हो कि तरिका भूल गर्ने।
प्रोफेसर निरन्तर रोगहरु को एक किसिम को complains। यो होसियार हेरविचार आवश्यक छ। Wynn अन्तमा कसरी पैटी आफ्नो नातेदार महसुस। उहाँले तिनीहरूले, आफ्ना भान्जी Sonya पनि सम्पत्ति बसोबास गर्ने संग, उहाँलाई लागि काम गर्ने सबै समय भन्छन्। अक्सर कुनै पनि indulging, हामी Serebryakov को सम्पत्ति मा कमाएको पैसा रूपमा पठाउन खोजे।
तपाईं भावना लुकाउन सक्दैन
सार "अंकल Vanya" स्थिति नकारात्मक Manor मा विकसित गरेको छ कसरी देखाउँछ। सबै वर्ण तिनीहरू केवल तिनीहरूलाई फिर्ता पकड बल छैन, भित्र धेरै भावनाहरू संचित छ। ASTROFF मताए र रूस सम्पूर्ण जीवन गाली गर्न थाले।
उहाँले अचानक कसरी सुन्दर हेलेना र प्राण, र शरीर, र विचार कुरा सुरु भयो। तर, आफ्नो राय, यो पूर्ण रूपमा जीवनको गलत तरिका, आफ्नै पति को खर्च मा parasitizing छ। यो महिला को सौन्दर्य डाक्टर वहन। सोनिया, बारी मा, ASTROFF लागि आफ्नो स्नेह बारेमा उनको सौतेनी आमा बताउँछ। त्यसैले प्ले "अंकल Vanya" मा आवेग सल्काउनुभयो। यो दोस्रो अध्याय को सारांश र अन्त।
जोडी Serebryakov बारेमा भावना जोश
सोनिया भन्छन् चाचा Vanya उनको सौतेनी आमा को एक छाया जस्तै Wanders, र डा ASTROFF त उसलाई उत्तेजित जो चिकित्सा, पनि जंगल, त्यागेर। हेलेना आफ्नो stepdaughter तिर आफ्नो मनोवृत्ति बारेमा पत्ता लगाउन आफ्नो भावना र पनि लक्ष्य लिएको छ बारे कुरा गर्न Astrov केटी प्रदान गर्दछ।
तर डाक्टर यसलाई नोटिस गर्नुभएन। बरु, उहाँले उसलाई आफ्नो प्रेम बारे Elena बताउन सुरु हुन्छ। उहाँले उनको चुम्बन गर्ने प्रयास गरिएको छ। यो दृश्य Wynn हुन्छ साक्षी। मामा Vanya मात्र भ्रमित छैन, तर पनि केही हदसम्म, पनि डराएको। एक महिलाले सम्पत्ति छोड्न चाहन्छ। यसरी, "अंकल Vanya" को एक सारांश अक्षरहरू सबै गोप्य भावना प्रकट गर्छ।
यो सम्पत्ति बेच्न हुनेछ, वा कसरी बस्न बासिन्दाहरूले
प्रोफेसर सम्पत्ति सबै बासिन्दाहरू भेला, र त्यो बेच्न जाँदै थियो घोषणा। उहाँले हुन् भनेर जमानत लगानी हुनेछ, र भावी पति सहज अस्तित्व तिनीहरूलाई प्रदान गर्नेछ। म आफ्नो प्ले "अंकल Vanya," Chekhov यो देखाउन चाहन्थे?
द्रुत सामग्री ठ्याक्कै सबै बयान वर्ण व्यक्त छैन, तर यो चरित्र पैटी र स्वार्थी छ रूपमा प्रोफेसर भने जो समाचार नै, को आधारमा हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं। उहाँले पनि तिनीहरूले आफ्नो छोरी सोनिया र Wynn बस्नेछन् जहाँ विचार गरेनन्।
हुनत एउटा महत्त्वपूर्ण तथ्य, लेखक द्वारा उल्लेख छ। यो त्यो हवेली सोनिया पर्छ के छ। त्यो यो आमाबाट जन्मजात पायो। पुस्तक "अंकल Vanya" को सारांश प्रोफेसर को बयान मा मुख्य वर्ण को प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न विफल हुन सक्दैन।
शट वा अन्तिम घटना कामहरू
Wynn बस जस्तै समाधान Serebryakov देखि उसिनेर। उहाँले अन्तमा लामो समय मा संचित थियो कि प्रोफेसर सबै व्यक्त गरे। यो एक विशाल घोटाले थाले। जुन बेलामा चाचा Vanya आफ्नो स्वभाव गुमाए र प्रोफेसर Serebryakov बोरिंग उहाँलाई गोली। तर, भाग्यवस, म छुट्यो।
"अंकल Vanya," Chekhov अन्त उत्पादन के हो? सार अन्त आउने, र यो asters र Wynn आफ्नो जीवन कुरा जो समयमा मात्र अन्तिम चरण, वर्णन गर्न रहनेछ। प्रोफेसर र पत्नी Kharkov जा रहेको छ। यो सम्पत्ति अझै नै रहनेछ। मामा Vanya र Sonya चलिरहेको अर्थव्यवस्था संलग्न। त्यो पनि एक राम्रो जीवनको सपना।
मिश्र र नदीको विल्सन
LVA Tolstogo गरेर "Kreutzer सोनाटा"। सारांश, कथा मा विश्लेषण र प्रतिक्रिया
नायक विशेषता। "आंधी" Ostrovskogo ए एन
सैन्य साहित्य: सामान्य सूची। आधुनिक सैन्य साहित्य
Voland: हरेक दिन को लागि उद्धरण
प्रसब पछि Seams
कान "Anauran" खस्छ: प्रयोगको लागि निर्देशन
प्रकार र उद्देश्य: को लागि पेंट सल्वैंट्स